Imikhiqizo yefektri - Abakhiqizi bekhwalithi ephezulu, abahlinzeki
Umshini Wokupakisha We-Powder Kuqondile (VFFS)
Isetshenziselwa ukufaka umthamo wemikhiqizo eyimbudumbudu nokusanhlamvu, enesisindo esiphezulu segranule / iyunithi eyodwa efinyelela ku-2-3g, njengoshukela, usawoti, ubhontshisi, irayisi, udali, i-pasta, ama-noodle, amantongomane, ama-musli, ukudla okulula, amaphilisi, imifino efriziwe, njll.
Okuzenzakalelayo Robot palletizer izikhwama
Irobhothi palletizer luhlelo oluguquguqukayo lokuthambisa olwenzelwe ukukhetha izikhwama / amabhele / izinyanda komunye othuthwayo ongenisiwe bese uzifaka endaweni eyodwa yokubeka, ehlangothini ngalunye lwe palletizer.
I-robot palletizer ezenzakalelayo ene-wrapper elula (Isitaki & Ukugoqa)
Izimboni ezisebenzayo: Ezolimo, Ukudla, Amakhemikhali, Ikhemisi njll. Njengelayisi, ushukela, usawoti, imbewu, ubisi oluyimpuphu, i-detergent powder, ukudla kwesilwane njll.
INcwadi Yesikhwama Semanyuwali ifakwe uhlelo olunesisindo se-elekthronikhi ukuhlangabezana nezindinganiso zomhlaba jikelele nokunikeza ukunemba okuphezulu nokwethembeka. Ukwakhiwa okulula nokuklanywa okuqinile kuqinisekisa ukusebenza okuphephile nokunembile.
Isikhwama seCarton Intermittent Motion Case Packer
I-GC iphakethe lesikhwama sokulayisha esiphezulu sezinhlelo zokusebenza ezinyakazayo ezingafinyelela ngejubane kuze kube amacala ayi-10 ngomzuzu, yakhelwe futhi yakhelwe ukupakishwa kwamacala kwamaphakethe nezikhwama eziguquguqukayo. Yisixazululo esifaneleke kakhulu sokufaka noma yimuphi umkhiqizo ikakhulukazi opakishwe emasakeni.
Ikesi Packer Machine For anezikhwama
Isikhwama ku-Bag Open Mouth Bag Placer, Filler & Closer (Amapakethe esikhwameni)
Uhlelo lwe-GW automatic bag placer system luphelele esitolo esikhulu nezimfuno ngokuthengisa ngokufeza ukusebenza okuphezulu kokusebenza, ukuklanywa kwalo kuvumela ukuqoqwa kwamaphakethe amancane nokuma okuqondile okuhleliwe ngokuhlukile esikhwameni somlomo esivulekile. Umugqa owodwa, umugqa owodwa ngokwawo noma amathayili amabili axegisiwe okuyisicelo samakhasimende.
Secondary Okufakiwe Bag Ngo Polywoven Bag Ukupakisha Machine
Isetshenziselwa kabanzi ukupakisha ilayisi, ushukela, imbewu, ukudla kwesilwane, inabukeni kanye ne-detergent powder lokhu kudla, izimpahla ezikhanyayo zezimboni nezimboni zezinto ezingamakhemikhali.
Isikhwama kumshini wokupakisha wesikhwama
Isikhwama kuMshini we-Bag Vertical Bagging Machine
Ithebula Eliqongelela Ukujikeleza
Onke amaphakheji amancane aqediwe ukufakwa etafuleni lokuqongelela elijikelezayo, abasebenzi bangahlala bazungeze ukwenza isibhakela esengeziwe, iphakethe lebhokisi.
Isithuthi esihambayo sisebenza ekulethweni kokugcina okupakishiwe kusuka phansi komshini wokugoqa mpo ukuze kukhishwe kwesinye isiteshi sokusebenzela.
123456 Okulandelayo> >> Ikhasi 1/13